Ọ bụ ezie na o yiri ọ bụ ezigbo mfe nyefee ngwa n'etiti iPhone na iTunes, na-abụghị geek ahịa na-emekarị na-eche nsogbu. Ọtụtụ ndị jụrụ ajụjụ "otú nyefee ngwa site m iPhone ka iTunes ebe m mkpa ndabere ha" na "otú nyefee ngwa site iTunes ka iPhone mgbe anọgide na-adị ngwa iji na okirikiri nhọrọ ukwuu na m iPhone". Isiokwu a na-ekpuchi 3 akụkụ, na-enwe olileanya i nwere ike inwe ihe ngwọta metụtara ebufe ngwa n'etiti iPhone na iTunes si ebe a:
Part 1. Olee nyefee ngwa site iPhone ka iTunes
Part 2. Olee nyefee ngwa site iTunes ka iPhone
Part 3. Olee otú Jiri nchekwa ma ọ bụ New Pages jikwaa iPhone égwu
Site n'ịgbaso ụzọ n'okpuru, ngwa ị zụtaara si gị iPhone na gị Apple ID ga-agafere nke iTunes Library. Ọ bụ nnọọ mfe. N'ezie, e wezụga otú a, ị nwekwara ike iji Wi-Fi nyefee ngwa site gị iPhone ka iTunes Library mgbe ha na-ejikọrọ na otu Wi-Fi. Na ịpị gị iPhone na e nwere mkparịta ụka igbe bụ "mmekọrịta na nke a iPhone n'elu Wi-Fi." Pịa ya nyefee ngwa site gị iPhone gị iTunes n'elu Wi-Fi. Iji nweta ihe ọmụma zuru ezu Ama, biko pịa ebe a >>
Cheta na: Ụfọdụ ndị na-eme mkpesa na mgbe na-ebufe ngwa site iPhone ka iTunes, na ngwa ọdịnala 'okirikiri nhọrọ ukwuu na iji na-agbanwe. Ee, ọ bụ. Ma ị pụrụ izere n'itinye mgbanwe gị iPhone. Oge ọzọ mgbe ị na-mmekọrịta ngwa site gị iTunes Library gị iPhone, lelee na mmekọrịta nhọrọ. Otú ọ dị, mgbe syncing amalite, pịa kagbuo button "x" na ọnọdụ mmanya.
Nzọụkwụ 1. Launch iTunes na pịa "Store" menu n'elu. Gị banye Apple ID nke na ị na-eji ibudata ngwa ọdịnala na gị iPhone.
Nzọụkwụ 2. Pịa "Store" menu ọzọ ma họrọ "ikikere nke a Computer". Nanị mgbe ikike a na kọmputa, na ị na-enwe ike nyefee ngwa site iPhone ka iTunes Library.
Nzọụkwụ 3. Jikọọ gị iPhone gị na kọmputa site na iPhone eriri USB. Pịa "View"> "Gosi sidebar". Si ebe a, ị pụrụ ịhụ gị iPhone n'okpuru "NGWAỌRỤ".
Nzọụkwụ 4. Right pịa gị iPhone na sidebar gị iTunes. Site ndọpụta ndepụta, họrọ "Nyefee ịzụrụ".
Nzọụkwụ 1. Launch iTunes na kọmputa gị. Pịa "View" menu ma họrọ "Gosi sidebar". Na mgbe ahụ, ị ​​pụrụ ịhụ ihe niile egosipụta na ekpe gị iTunes Library.
Nzọụkwụ 2. Jiri iPhone eriri USB jikọọ gị iPhone gị na kọmputa. Ọ bụrụ na ị jikọọ ịga nke ọma, ị pụrụ ịhụ gị iPhone egosipụta n'ime NGWAỌRỤ ebe.
Nzọụkwụ 3. Tupu ebufe ngwa site iTunes ka iPhone, na iTunes preview window, ị nwere ike ịdọrọ ngwa chọrọ ebe ma ọ bụ ịkpali otu ngwa ọzọ ka ike a na nchekwa maka ha. (Nhọrọ)
Nzọụkwụ 4. Pịa "Mee" iji malite usoro nke na-edegharị ngwa site gị iTunes gị iPhone. N'akụkụ aka nri nke iTunes, ị pụrụ ịhụ na ahụ ọkwa.
Part 3. Olee otú Jiri nchekwa ma ọ bụ New Pages jikwaa ngwa ọdịnala na iPhone
Ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ ngwa ọdịnala na gị iPhone, ị ga-mkpa idozi ma jikwaa ha na edemede. Na gị iPhone, ị nwere ike ịmepụta nchekwa ma ọ bụ ọhụrụ peeji nke na-edebe ndị a ngwa ọdịnala. N'okpuru ebe a bụ otú.
1. Mepụta nchekwa na Pọt égwu na:
N'ụlọ ihuenyo gị iPhone, ị pụrụ ịhụ akụkụ nke ngwa ebe a. Enweta otu ngwa icon ruo mgbe niile ngwa n'ikwe. Enweta otu ngwa na-akpali ya ọzọ ngwa nke na ị na-aga na-etinye ọnụ. Na mgbe ahụ a na nchekwa na-kere maka 2 ngwa. Pịnye a aha maka nchekwa. Na mgbe ahụ ị nwere ike ịdọrọ ndị ọzọ ngwa ọdịnala nke dịịrị a, Atiya a nchekwa.
2. Paghaa ngwa New Pages:
Ị nwere ike ịmepụta multiple peeji nke jikwaa ngwa. Niile ị chọrọ bụ ka ịdọrọ na dobe ngwa ka a na peeji na akara ngosi na gị iPhone.
Mmekọrịta Ihe niile na iPhone
Bugharịa faịlụ site Blackberry ka iPhone
Best iPhone Nyefee Software maka Ị
Back Up iPhone ka PC
> Resource> iTunes> otú nyefee ngwa site iPhone ka iTunes & si iTunes ka iPhone